यस्ता संकेत देखिए सम्झनुहोस् तपाईंको जीवनमा सफलता प्राप्त हुदैछु ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यस्ता संकेत देखिए सम्झनुहोस् तपाईंको जीवनमा सफलता प्राप्त हुदैछु !
रुघाखोकी;जाडोयाममा शरीरमा भाइरस बढी स क्रिय हुने भएकाले रुघाखोकी बढी लाग्छ। रुघाखोकी मात्रै होइन योसँगै एल र्जी पनि हुन्छ।रुघाखोकीबाट बच्न बाटोमा हिँड्दा समेत धुलोबाट जोगिनेगरी मास्क लगाएरहने?र हिँड्नु पर्छ। साधारण खाले रुघा छ भने घरेलु उपायले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। भाइरलको संक्र मण फैलिएको बेलामा विद्यालय जाँदा र अन्यत्र हिँड्दा जोगिनु पर्छ। साधारण खाले रुघाखोकीलाई घरमै उपचार गर्न सकिन्छ। तर रुघाखोकीसँगै नाकबाट पहेंलो सिंगान आउने, नाक बेस्सरी बन्द हुने, घाँटीको समस्या आउने, कानमा पनि समस्या छ भने होसियारी अपनाउनुपर्छ। किनकी नाक, कान र घाँटीले एक आपसमा असर पारिरहेका हुन्छन्। बालबालिकाको हकमा त अझै ध्यान दिनुपर्छ।
जाडोमा कसरी स्वस्थ रहने? न्यानो कपडा लगाउनुपर्छ।टोपी, मफलर, पन्जा र मोजा लगाउन बिर्सनु हुँदैन। विशेषगरी बाहिर निस्कदा सचेत रहनुपर्छ।बिहान पर्याप्त शारीरिक ब्यायाम गर्नुपर्छ।जाडोमा कम शारीरिक कसरत र बढी खाना खाइने हुनाले तौल बढ्ने सम्भावना हुन्छ। तौल नियन्त्रण गरी स्वस्थ रहनुपर्छ। चिनीजन्य खाद्यपदार्थबाट जोगिनुपर्छ।पर्याप्त तातोपानी पिउन आवश्यक छ। चिसो मौसममा हामी पानी कम पिउने गर्दछौं।जसले गर्दा अन्य स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुनसक्छ।चिसोमा सारुवा रोगबाट बच्न सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। नियमित साबुनपानीले हात धुने र शरीर फुर्तिलो राख्न बेलाबेलामा नुहाउनुपर्छ। चिसो पानी भन्दा मनतातो पानीले नुहाउनु राम्रो हुन्छ।यस्तै चिसोमा ओठ फुट्ने समस्याबाट बच्न लिपगार्ड लगाउनुपर्छ।
जाडोमा सबैभन्दा बढी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखापर्छ। यस्तो बेलामा रुघाखोकीले ज्यादा सताउने गर्छ। हाच्छिउँ गर्दा नाकमुख छोपेको हात धुने, छुट्टै खालका रुमालहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। सं क्र मण भएको छ भने मास्क लगाएर हिंड्न आवश्यक छ।- मुटुका बिरामीहरुले जाडोमा बाधा पर्ने गरी शारीरिक काम गर्नु हुँदैन। बिहान-बेलुका बढी जाडो हुने भएकोले घरभित्रै बस्नुपर्छ।
घरमा नकारात्मक शक्तिको प्रभाव वा वास्तुदोष हटाउन शिव पूजा गर्नुहोस